Hamro Yatra | » ह्वात्तै घट्यो कोरोना संक्रमण, आइसियू बेड धमाधम खाली हुँदै ह्वात्तै घट्यो कोरोना संक्रमण, आइसियू बेड धमाधम खाली हुँदै – Hamro Yatra
> ह्वात्तै घट्यो कोरोना संक्रमण, आइसियू बेड धमाधम खाली हुँदै
काठमाडौं, असोज ५ । पछिल्लो साता नेपालमा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै घटेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक सातायता कुल परीक्षण गरिएकामध्ये जम्मा ९.७ प्रतिशत मानिसमा संक्रमण देखिएको छ। जुन यो वर्ष यताकै सर्वाधिक कम संक्रमण दर हो।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक सातामा कुल ९५ हजार ४२६ जनाको परीक्षण गर्दा जम्मा ९ हजार २६१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको देखिन्छ। हिजो (सोमबार) पनि जम्मा १३ हजार ८ सय १७ जनाको परीक्षण गर्दा एक हजार ९५ जनामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको थियो। जुन ७.९ प्रतिशत हो। तथ्यांक अनुसार हेर्ने हो भने असोज लागेयता दैनिक संक्रमण दर एक अंकमा झरेको देखिन्छ। असोज १ गते १२.५ प्रतिशतमा संक्रमण देखिए पनि त्यसयता भने दैनिक ९ प्रतिशतभन्दा कममा संक्रमण देखिएको छ।
गत भदौको सुरू भएदेखि विस्तारै घट्न थालेको संक्रमण दर असोज पहिलो सातासम्म आइपुग्दा उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको पाइएको हो। जबकि साउन तेस्रो सातादेखि भदौ पहिलो सातासम्मको १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा कुल परीक्षण गरिएकामध्ये १९ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको थियो। तर असोज पहिलो सातासम्म आइपुग्दा सो संख्या झरेर ९ प्रतिशतमा पुगेको छ। अर्थात् गत महिनाको तुलनामा संक्रमण दरमा झन्डै आधाले सुधार भएको छ।
संक्रमण दर मात्र हैन पछिल्लो साता अस्पतालमा भर्ना हुने गम्भीर अवस्थाका बिरामीको संख्यामा पनि कमी आएको छ। संक्रमितहरू भर्ना हुने क्रम घटेपछि अहिले काठमाडौं उपत्यकाका ठूला अस्पतालका आइसियू बेडहरू धमाधम खाली भइरहेका छन्।
टिचिङ, टेकु, वीर, पाटन, सिभिल र एपिएफजस्ता कोरोना उपचार गरिरहेका ठूला अस्पतालमा अहिले आइसियूमा उपचाररत बिरामीको संख्या झन्डै आधा कम भएको छ। एक साताअघि यी अस्पतालमा १०७ जना संक्रमित आइसियूमा उपचाररत रहेकोमा यो साता जम्मा ७६ जना बिरामी आइसियूमा उपचाररत छन्।
टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाले आइसियूमा उपचाररत बिरामीको संख्यामा उल्लेख्य सुधार आएको बताएका छन्। उनले २४ बेडको आइसियू क्षमता रहेकोमा हाल ११ जना बिरामी उपचाररत रहेको जनाए। संक्रमण रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डा. बाँस्तोला पछिल्लो साता संक्रमण घट्नुले अब सहज अवस्थातिर प्रवेश गरेको बताउँछन्। ‘अझै पनि संक्रमणको जोखिम त छ तर पछिल्लो समय संक्रमण दरमा जुन सुधार देखिएको छ, त्यसले सहज अवस्थामा प्रवेश गरियो भन्ने बुझाउँछु,’ उनले भने।
डा. बाँस्तोलाले संक्रमण दर घट्नुमा मुख्य कारण खोप लगाउने मानिसको संख्या बढ्नु र संक्रमित भइसकेका मानिसमा एन्टिबडी विकसित हुनु रहेको बताए। उनले भने, ‘समुदायमा एन्टिबडी विकसित हुने मानिसहरूको संख्या बढ्यो। किनभने धेरैलाई यसअघि नै संक्रमण भइसकेको छ। त्यस्तै, खोप लगाउने मानिसको संख्या पनि बढेको छ। र यसपटक निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि पहिलेको जस्तो संक्रमण फैलिएको छैन।’
नेपालमा हालसम्म एक करोड डोज बढी खोप लगाइसकिएको छ। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मंगलबारसम्म ५२ लाख जनाले पूर्ण डोज खोप लगाएका छन् भने ५८ लाख जनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन्। अहिले पनि चीनबाट खरिद गरी लगाइएको ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ। त्यसैले, खोप लगाउनेको संख्या धेरै पुगेकाले पनि संक्रमण फैलिन नपाएको विज्ञहरूको तर्क छ।